Ifenitshala yeplastiki iye yaba yinto entsha kwishishini lefenitshala
Izahlulo zefanitshala zeplastiki
Iinyawo zokulinganisa ezinokuhlengahlengiswa
Imilenze yefenitshala yeplastiki
Umkhuseli wecala leplastikhi lebhokisi
Iplagi eludongeni olujikelezayo
Iplanga yokuguqula i-butterfly anchor
Isixhobo seplastikhi sokwandisa iplagi
Abakhuseli beKona yefanitshala
Unxibelelwano lwefanitshala kunye nezinto zokuqinisa
Izixhobo zokukhanyisa ngeplastiki
Ukuvalelwa komqhubi weplastikhi
Isibane sesitshixo socket
Imitya yeplani yefenitshala
Ezinye izinto zePlastiki
Ekhaya > Iindaba zeshishini > Ifenitshala yeplastiki iye yaba yinto entsha kwishishini lefenitshala
Ngokuhlaziywa okuqhubekayo kweemfuno zokukhusela okusingqongileyo, "ngomthi weplastiki" ixesha elizayo, ifanitshala yeplastiki enombala ongqindilili kunye nesitayile yoyilo esefashini ngokuthe ngcembe iba ligunya elitsha lefenitshala yefenitshala. Kwiminyaka yakutshanje, iimveliso eziphambili zeplastikhi ephezulu iimveliso zefanitshala ziyaqhubeka ukumilisela, isicwangciso-qhinga seemarike zefenitshala yeplastiki ukusuka kusetyenziso oluninzi olusisigxina ngokuthe chu ukuya kuphuhliso oluphezulu lwabathengi.
Inye, ifanitshala yeplastikhi eqaqambileyo ininzi
Kule mihla, uhlobo lwefenitshala lweplastiki olusebenza kusapho alunakubalwa: Yitya itafile, ikhabethe, ibhakethi lelayisi, ityeya yomxholo wevenkile, isitya sokuhlambela ukunxiba, izihlangu zokulinda le fenitshala yeplastiki ukuba isebenze kungekuphela nje, kwaye iseyinto yokuhombisa igumbi lokulala.
Umzekelo, idesika yeplastiki kunye nombala wesitulo inemibala eqaqambileyo kwaye ityebile, ikhanya kwaye ilungile, indawo eqaqambileyo enokugoba ngokuthanda ivumela abantwana ukuba bathande. yongeza ulonwabo oluninzi.
Xa kuthelekiswa nesitshixo sokugcina iinkuni zemveli, ilokhari yokugcina iplastikhi ineepatheni ezininzi zokwenza, kwaye kulula kakhulu ukuvula okanye ukuhambisa ilokhari yokugcina, kunye nokuhlanganiswa kombala kunye nemodeli kulungelelaniswe kakhulu. jonga ngokukhanya nangokusebenzayo, unokubeka amalaphu emihla ngemihla ukuze ube nakho ukufaka into encinci oyithandayo hayi kuphela, amalaphu abeka ixesha elide athathwa njengebhasikithi yomoya ngokulula ngakumbi.
Okwesibini, imarike yefenitshala yeplastiki inethemba
Kule minyaka idlulileyo, ifanitshala yeplastiki ibonakalisa ukwahluka, imeko elungileyo yokwahluka.Ukutshintsha kwengcinga yokusetyenziswa kunye nokuma kunye nokuhluka kwemfuno yefenitshala, ifanitshala yeplastiki ithandwa kakhulu sisizukulwana esitsha. Kwiminyaka yakutshanje, uninzi lwabayili kunye namashishini efanitshala asungule iimveliso zefanitshala zeplastikhi ezinezinto ezityebileyo zeThe Times, kwaye ifanitshala yeplastiki ngokuthe ngcembe iba yi "khekhe enkulu" ehlala iingxilimbela zefanitshala.
Edlulileyo:Izixhobo zefanitshala zefanitshala zeOfisi kufuneka zisebenzise ntoni?
 Inombolo ye-169, iXianjiang Road, iDalang Town, iDongguan City, kwiPhondo laseGuangdong, China
@Copyright 2020-2021 Dongguan Qiaofeng Plastic Hardware Iimveliso Co, Ltd.